भीमबहादुर र हिन्दु धर्म
– निष्णु थिङ
गत असोज २८ गते दर्शैको रमझमको बेला चितवनमा भीमबहादुर विकको हत्या भयो । उनको हत्याका मूलकारण उनी मन्दिर प्रवेश गर्न खोजेको प्रयास हुन् । मन्दिर प्रवेशमा उनलाई रोक्दै उनको हत्या गरे । हिन्दू धर्मले शासन गरेको हरेक ठाउँमा दलितहरुलाई हजारौं वर्षदेखि मन्दिर प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउदै आएको छ । दलितहरु प्रवेश गर्नुलाई पाप मानिन्छ र त्यो मन्दिर अशुद्ध भएको ठानिदै आएका छन् । त्यस्तै केही वर्ष अगाडि वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी जनकपुरमा जानकी मन्दिर प्रवेश गर्दा अशुद्ध भएको भनी सरसफाईका कार्य गरेका थिए ।
हिन्दू धर्मका सम्पूर्ण देवीदेवताका मूर्तिहरु र मन्दिरहरु निर्माणका कालिगढ नै मूलतः दलितहरु हुन् । देउतादेखि देउता बस्ने घर बनाउने दलितहरु नै त्यहीबाट प्रताडित हुँदै आएको परिदृश्यमा दक्षिण एसियाका दलितहरुको मानव अधिकार न्यूनतम पनि रहेको पाइदैन । हिन्दू समाज र सभ्यता निर्माणका कालिगढलाई त्यो समाजले कहिले पनि मानवको दर्जासमेत दिइएन । त्यसैले दलितहरु नेपाललगायत दक्षिण एसियामा मन्दिर प्रवेश अभियानहरु सञ्चालन गर्दै आएका छन् । तर त्यसले त्यति सुधार ल्याएको देखिदैन । हिन्दू धर्ममा सुधारको सम्भावना नदेखेरै होला, डा. भीमराव अम्बेडकरले सन् १९५६ मा १० लाख दलितहरु सहित बौद्ध धर्ममा प्रवेश गरेका थिए ।
कार्तिक २५ गतेदेखि १२ औं राष्ट्रिय जनगणना हँुदैछ । गणकहरुले नागरिकका घर÷घरमा गएर तथ्यांक संकलन एवं लेखन गर्दैछन् । गत दशकका जनगणनाहरु निकै विवादित हँुदै आएका छन् । तथ्यांक र मिथ्यांक नाममा थुप्रै बहसहरु अगाडि आएका थिए । यसपालिको जनगणना कति विवादरहित होला, त्यो त हेर्न बाँकी छ । तथापि तथ्याकंमा राज्यले राजनीति गर्दै आएको कसैमा लुकेको छैन । तथ्यांक संकलनदेखि प्रशोधन र प्रकाशनसम्म आइपुग्दा थुप्रै त्रुटिहरु केही नियतवश र केही अन्जानमा भएका छन् । तथ्यांक विभागमा कृयाशील तथाकथित विज्ञहरुले पनि विज्ञताको नाममा द्धन्द्ध उत्पादन गर्ने खेतीहरु पनि गर्दैछन् । ती विज्ञहरुले विवादको निरुपण गर्ने भन्दा पनि आफ्नो दुनो सोझ्याउने र आफ्ना वर्चश्व र स्थार्थका लागि विभिन्न झमेला र भुलभुलैया सृजना गरिदै आएका छन् ।
नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक भएपछि आसन्न समेत गर्दा दुईवटा जनगणना हुँदैछ, अझैपनि धर्मनिरपेक्ष जनसंख्या कति छ ? त्यसको तथ्यांक निकालेको छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले धर्मको महल मात्रै राख्दै आएको छ । धर्म मान्ने जनसंख्याको तथ्यांक निकाल्न यस्तो गरिदै आयो । धर्मको महलसँगै धर्मनिरपेक्ष र नास्तिक पनि राखिनु पथ्र्यो, त्यसलाई अझै स्थान दिइएको छैन । १२ औं जनगणनासम्म आइपुग्दा नेपालमा कति धर्मनिरपेक्ष र नास्तिक जनसंख्या छ ? त्यसको कुनै लेखाजोखा नै छैन । आजका दिनमा नागरिकले धर्ममा विश्वास गर्छन् नै भन्ने छैन । विश्वमा नास्तिक जनसंख्या बढ्दो क्रममा छ । तर नेपालमा चाँहि नागरिकलाई धर्मनिरपेक्ष वा नास्तिक के हो ? त्यो अकिंत गर्न मौका नै दिइएको छैन ।
तथ्यांक सृजित मिथ्यांक
नेपालका हरेक जनगणनाले हिन्दू धर्म मान्नेहरुको संख्या अत्याधिक देखाउदै आएको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले हिन्दू धर्म मानेको तथ्यांकले बताउँछ । यसपालिको जनगणनाले पनि यस्तै तथ्यांक ल्याउने कुरामा कुनै द्धिविधा छैन । जबकि यहाँ कम्युनिष्ट जनमत प्रत्येक पाँच÷पाँच वर्षमा गरिने आम निर्वाचनमा व्यापक प्रकट हुन्छ । गत आम निर्वाचनमा त नेकपा(एमाले) र माओवादी मिलेर बनेको वामगठबन्धनले त करिब दुई तिहाइ जनमत नै ल्यायो । अरु साना वाम दलहरु राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टीलगायतका मत जोडे भने दुई तिहाइ त कम्युनिष्ट जनमत नै देखाउँछ । आधारभूत रुपमा कम्युनिष्टहरु धर्मलाई अफिम मान्ने र नास्तिक हुने भएकाले ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दू धर्म मान्नेहरुको जनसंख्यालाई यसले दरिलो प्रतिवाद गर्दछन् । आम निर्वाचनमा व्यक्त भएको जनमतलाई तथ्यांक मान्न सकिन्छ कि सकिदैन ? निर्वाचन आयोग पनि राज्यको संवैधानिक आयोग भएकोले यसले गरेको निर्वाचन पनि आधिकारिक नै हुन् । निर्वाचनमा व्यक्त भएको अभिमतलाई विश्वमा सार्वभौम मानिन्छ । निर्वाचनमा व्यक्त भएको अभिमत र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको जनगणनाका बीचमा कहाँनिर गडबड छ ? १९ को २० भएको भए त्यति फरक पर्दैन थिए तर जहाँ पाँच वर्षमा हुने आवधिक निर्वाचन र दश वर्षमा हुने जनगणनाले ल्याउने तथ्य र तथ्यांकले एकापसमा मेल खादैन । यसले नेपालमा भएका कम्युनिष्ट नाम मात्रको हो वा जनगणनामा गम्भीर त्रुटि छ ? त्यसको संकेत गर्छ । या धर्मको महलमा माथि उल्लेख भएजस्तै धर्मनिरपेक्ष वा नास्तिकता जनाउने अवसर नदिएकाले त्यस्तो हुन गएको हो ?
धर्मान्तरण र मन्दिरमा प्रतिबन्ध
११ औं राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा इसाई धर्म मान्ने जनसंख्या १.४ प्रतिशत देखाउदा आतकिंत भएर त्यसको हिन्दू बुद्धिजीविले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । अब नेपाल सक्यो, इसाईले देशै सिध्यायो भनेर देशव्यापी हल्ला गरेको थियो । यहाँ इसाईकरणलाई पटक्कै नसहने र त्यसलाई देखाएर कमल थापाहरुले दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा राम्रै मत संकलन गरे अनि केही थान मन्त्री पदहरु पनि कुम्ल्याए । अझै पनि बढ्दो इसाईकरणलाई भजाएर सत्ताको रोटी सेक्ने दाउमा केही शक्तिहरु अग्रसर छन् । यसपालिको जनगणनाले पक्कै इसाई जनसंख्या वृद्धि भएको तथ्यांक ल्याउने छ । त्यतिबेला पनि एकथरि कराउने छ र देश बर्वाद भयो भन्ने आलाप विलाप गर्ने छन् । यहाँ इसाईकरण किन भइरहेको छ ? इसाईकरणलाई वृद्धि गराउन हाम्रो आफ्नै धर्म, संस्कार र व्यवहार कति सहयोगी छ ? त्यतातिर खासै ध्यान दिएको पाइदैन ।(हेर्नुहोस् ‘नेपालमा इसाईकरण’ गोर्खापत्र दैनिक २०७२ भाद्र १२ गते) हिन्दू धर्मबाट हुने बर्बर यातना, हिंसा, बहिष्करण, छुवाछुत, उचनीच र दानवीकरण गर्ने कार्यले गर्दा यहाँ दलितहरु तीव्र गतिमा इसाईकरण भइरहेका छन् । हिन्दू धर्मलाई सुधार गर्नुको साटो इसाईकरणमा लामबद्ध दलितहरुलाई दुत्कार्ने काम बढी भएका छन् । हिन्दू धर्मभित्र दलितहरुको स्थान के हो ? उही शुद्रबाहेक केही छैन । उनीहरुलाई सम्मान दिइदैन र उनीहरुका आत्मसम्मानमा आघात पु¥याउने बाहेक केही गरिदैन । त्यस्तो अवस्थामा इसाईकरण नभएर के हुने त ? वास्तवमा दलितहरु इसाई धर्मको आकर्षणले भन्दा हिन्दू धर्मको प्रताडनाले इसाईकरण भएका देखिन्छन् । दलितहरुलाई इसाई धर्मभित्र पनि कहाँ सन्चो छ र ! भारतमा इसाई धर्म र त्यहाँ दलितको स्थिति हेर्ने हो भने तात्विक भिन्नता केही छैन । हिन्दू धर्म छाडेर लोभ लालच र डलर कुम्ल्याउने उद्धेश्यले इसाई धर्ममा प्रवेश गरेका एकमुठी ब्राह्मणहरुले उनीहरुलाई उनै छुवाछुत र हिंसा, दानवीकरण र अपराधीकरण गर्दै आएका छन् । दलितहरुलाई चर्चमा प्रवेश निषेध छ, जहाँ तथाकथित उच्च जातका मानिसहरु जाने गर्दछन् । उनीहरुका लागि बेग्लै चर्च निर्माण गरेको पाइन्छ । विचरा दलितहरुले इसाई धर्म अगांलेर पनि चैन सास फेर्न पाउदैनन् ।
१२ औं जनगणनाले इसाई जनसंख्यामा बृद्धि भएको तथ्यांक ल्याउने छ । किनकी नेपाली समाजमा विभेदलाई संस्थागत गर्ने कार्यमा कुनै कमी आएको छैन । समाजका सबै संरचनाहरु उस्तै छन् । भीमबहादुर विकहरुलाई मन्दिर प्रवेशमा रोक मात्रै लगाएको छैन । उनीहरुलाई अझै कुकुर र बिराला जसरी मारिन्छन् । त्यसको कानूनी सदगत त हुन्छ होला तर, विभेद उत्पादन गर्ने कारखाना बन्द गरिएको छैन । जबसम्म कारखाना रहिरहन्छ थुप्रै भीम बहादुर विकहरुले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्दछन् । उनीहरुका जीवनका कुनै मूल्य नै यो समाजमा रहेको ठानिदैन । दोषारोपणको राजनीति छाडेर हिन्दूहरुले आफ्नै धर्मको पो सुधार गर्नेतिर लाग्ने हो कि !